Maxay Haweenka U qayliyaan Xiliga Ciyaarta Sariirta Gabagabada tahay???? - Hablaha Media Network
Maxay Haweenka U qayliyaan Xiliga Ciyaarta Sariirta Gabagabada tahay????
HMN:- Baaritaan dheer oo Ay sameeyeen Rag Ku Xeel dheer Arimaha Galmada Ayaa soo saaray In Sedex arin oo u sabab u Tahay qaylada haweenka ka soo yeerta
Xiliga ciyaar sariireedka gaar ahaan marka malabyarowga uu ku dhex mirqo , waa ayna ku kala duwan yihiin haweenka arintaan maadaama ay jiraan kuwo aysanba cod ka soo bixin xiliga ciyaarta . Hadaba waxa ayna haweenkaas u kala qeybin karnaa marka jugta weyn socota ilaa sedex oo kala ah Haweeney Qaylisa ,
Haweeney Taahda (Hinraag)(Haarta) iyo Haweeney Aamusan. Waxaadna qorshaha ku darasataa in aan la xakamyen karin ama la qarin karin codadka xiliga ciyaarta
Waayo maxaayeelay si dabiici ah ayay ku yimaadaan. Waxaana lagu soo koobi karaMa qaylada haweenka xiliga kulanka kala baxa dhacayo mid la xariira raaxo
Macaan oo gaartay gariirka galmada .
Waxa ayna qaylada haweenka timaada marka afka hore ee malabyarowga uu gaaro goobta loo yaqaan G-Spot waana meesha
Haweenka ka helaan raaxada waalida ah , waxa ayna meeshaas ku taal dhakada sare darbiga xubinta haweenka ee gudaha, hadaad meeshaas malabyarowgada soo xoq-xoqo hawneeydas raaxo uma dhinna . Sidoo kale qaylada haweeka xiliga.